Zvevashandi - Zhuoer Chemical Co, Ltd.
Mazuva ese Chemical Chemical Raw Zvishandiso
Catalyst & Chemical Anobatsira MaAgents
Zhuoer Chemical Co., Limited ikambani inochengetedzwa nehunyanzvi uko vanhu vanoshanda pano vanoita mutsauko wese. Ivo vane mufaro, simba, kuzvipira uye pfungwa yechinangwa kuendesa izvo izvo mutengi anoda. Isu tiri musangano wevatengi centric uko pasina nzvimbo yekusarura pahwaro hwerudzi, murume kana mukadzi, kutenda uye nenzvimbo yavakabva Iyo Kambani inopa nharaunda inobatsira vanhu kuratidza kwavo matarenda uye mibairo mashandiro nemhedzisiro. Iyi nzvimbo yekushanda yakaoma yakabatsira Zhuoer kemikari kukwezva, kuvandudza nekuchengetedza tarenda.Vashandi vedu vanokurudzirwa kugovana mazano, kushandira pamwe uye kunzwisisa kuti isimba rekubatana kwechikwata chinoita kuti tibudirire. Isu tinofambiswa nemabasa uye tinoshanda nesimba kudzidzisa pfungwa yehunhu muzvinhu zvese zvesangano redu kubva kuzvigadzirwa zvedu nemasevhisi kukudziridzwa kwevashandi vedu.
Isu tinogadzira yakasarudzika chirongwa chekuvandudza kuti ikubatsire iwe kuzadzisa rako rebasa zvinangwa. Isu tinoshanda pamwe newe kuvaka basa rakareba uye rinopa mubayiro nekupa:
Kuenderera mberi kuronga kwekuvandudza basa
Yemukati neyekunze / off-saiti kudzidzisa zvirongwa
Mikana yebasa remukati kufamba / Job Rotation
Makomborero & Kuzivikanwa: Zhuoer kemikari inopa nharaunda inobatsira vanhu kuratidzira matarenda avo uye mibairo yekuita uye mhedzisiro. Isu tinopa mubairo vatambi vedu venyeredzi kuburikidza nemubairo wakasiyana uye zvirongwa zvekuziva
Kunakidzwa Kubasa: Isu tinofambisa nharaunda ye'Kunakidzwa 'kubasa. Isu tinoronga zviitiko zvemitambo uye zviitiko zvetsika senge Zuva revana, Middle Autumn mutambo, nezvimwe. gore rega rega kune vedu vashandi kunzvimbo dzese dzekushandira
Zhuoer kemikari kuhaya vane tarenda, vakazvipira uye vanozvityaira vanhu uye vanoedza kugadzira nzvimbo yebasa iyo inoburitsa muzvinabhizimusi mukati medu tese.
Nei uchishanda paZhuoer Chemical?
Kufuridzira hutungamiriri hudiki
Yemakwikwi mibairo uye mabhenefiti
Inogonesa nharaunda yekusimudzira basa uye kufambira mberi
Inoshanda uye inobata nharaunda yebasa
Kuzvipira kune mushandi hutano uye kuchengetedzeka
Shamwari basa Kushanda mhepo
Kwete 1588, Lianhang Road, Minhang Dist, Shanghai, China